﻿ ​ओठ फुट्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
​ओठ फुट्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
ओठ शरीरको एक महत्वपूर्ण भाग हो । यो फुट्यो भने धेरै समस्या हुन्छ । ओठ फुट्नाले केही खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने र अनुहारको सौन्दर्य बिग्रने हुन्छ । जाडोको समय वा सुख्खा धुलो चल्ने मौसममा सबभन्दा बढी ओठ फुट्छ ।
बढी चिसो हुँदा ओठमा रहेको तैलीय पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थिहरूले कम तेल निकाल्छन् र ओठ फुट्न थाल्छ ।
केही सावधानी र घरेलु विधिको प्रयोगले पनि ओठ फुट्नबाट बचाउँछ । घरबाट बाहिर निस्कनुअघि कुनै तैलीय पदार्थ ओठमा दल्ने र केही छिनपछि सूतीको कपडाले हल्का पुछेर निस्केमा केही राहत मिल्न सक्छ ।
पहिलो विधि भनेको ओठ चुस्ने वा चाट्ने बानी हटाउनु पर्छ । ओठ फुट्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू बारम्बार जिब्रोले ओठ चाट्छन् । यसो गर्दा केही सन्चो भएजस्तो लाग्छ तर थुक सुकेपछि पहिलेको भन्दा झन् सुख्खा हुन्छ । बारम्बार ओठ चाटिरहँदा ओठको छाला वरिपरि कालो हुन जान्छ । विशेष गरी यो बालबालिकालाई देखापर्ने समस्या भए पनि कहिलेकाहीँ ठूला व्यक्तिहरूमा पनि देखापर्छ ।
घरेलु उपचारमा ओठमा मह लगाउँदा ओठ फुट्दैन । त्यसैगरी घीउ र नरिवलको तेल लगाउँदा पनि ओठ फुट्नबाट बच्न सकिन्छ । राती सुत्ने बेलामा घरमै पाइने घिउ, मखन, दूधको तर आदि हलुका तरिकाले ओठमा दल्नाले फाइदा पुग्छ ।
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा पनि ओठ, गाला, हात, खुट्टा फुट्न सक्छ । त्यसैले पानी धेरै पिउनु पनि यो समस्याबाट बँच्ने उत्तम विधि हो । बाहिरी वातावरणमा जानु पर्दा लिप जेल, लिप गार्ड वा लिपस्टिक लगाउँदा पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट बँच्न सकिन्छ ।
जाडोमा दैनिक सुन्तला र बदाम सेवन गर्नाले पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट बँच्न सकिन्छ ।
घरेलु विधि प्रयोग गर्दा पनि ओठ फुट्ने समस्या देखिएमा छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ । कहिले काँही रोगका कारण पनि ओठ फुट्न सक्छ । चिकित्सकका अनुसार जाडो मौसममा थाइराइड, इन्डोक्राइन जस्ता ग्रन्थीमा समेत रगतको मात्रा कम भएर त्यसको परिणामस्वरूप ओठ फुट्न सक्छ । कहिले काँही शरीरले प्राकृतिक रुपमा ओठमा तेल उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा कमी आएर पनि ओठ फुट्न सक्छ ।
ओठ फुट्दा सुरुवातमा ओठको माथिल्लो भागमा के–के भएजस्तो हुन सक्छ । ज्वरो आएको बेला वा जाडो भएको बेला यो बढी हुन्छ ।
यसैगरी, हात खुट्टाका छाला खस्रो हुनु र फुट्नु पनि शरीरले तैलीय पदार्थ उत्पादन कम गरेका कारणले हुने अवस्थाहरू हुन् । यस कारण शरीरका हावा पर्ने भागमा चिल्लो पदार्थ÷तैलीय पदार्थ लगाइ फुट्नबाट बच्न सकिन्छ ।